Koorsooyinka ugu wanaagsan ee QGIS ee Isbaanish - Geofumadas
Koorsooyinka ugu fiican ee QGIS ee Isbaanishka
Janaayo, 2018 Baridda CAD / GIS, qgis
Qaadashada koorsada QGIS waa hubaal ujeedada badan ee sanadkaan. Ka socota barnaamijyadda furan, QGIS waxay noqotey xalka ugu baahida badan, labadaba shirkadaha gaarka ah iyo ururada dawlada.
Sidaa darteed, xitaa haddii aad haysan kartid ArcGIS ama qalab kale, oo ay ku jirto dib uhabayntaada QGIS waa ku-dhowdahay waajibaad.
Tani waa aruurinta koorsooyinka QGIS ee Isbanishka si aad u dooran kartid. Waxaan ku amartay qiimaha, tan iyo intii ugu sarraysay. Inkastoo aan kuqornay xogta qiimaha leh, sida tirada saacadaha iyo taariikhda lagu qiyaasay ee koorsooyinka bilaabmaya 2018.
Maya magaca Saacadaha Inicio Qiimaha Bixiye
1 Baro Nidaamka Nidaamka Nidaamka Nidaamka Aasaasiga QGIS (GIS) free free 50 $ Holger Bermeo - Udemy
2 Koorsada koobiga ee QGIS Toddobaadyada 8 free 60 $ Gidahatari
3 QGIS wax ku ool ah oo ka yimaada xoqan iyo Qalabka fog ee beeraha free free 70 $ Pedro Barrera Puga - Udemy
4 Baro QGIS xoqid. Gambiyo lacag la'aan ah GIS free free 75 $ GeoCastAway - Udemy
5 Kombuyuutarka Kursiga SIG horas 30 free 80 € IniSIG
6 Koorsooyinka Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed ee QGIS Bilaha 3 3-ene-2018 137 $ Kuleejka Geographers of Peru - ICIP
7 Koorsada internetka QGIS 2.18 Las Palmas horas 60 11-ene-2018 200 € Mapping GIS
8 Koorsada internetka ee QGIS iyo heerka isticmaalka cawska horas 80 22-ene-2018 240 € CursosGIS - TYC GIS
9 Heerka bilaabista QGIS horas 90 15-feb-2018 248 € Imasgal
10 Koorsada QGIS - Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed Toddobaadyada 4 5-ene-2018 300 $ MasterSIG
11 Koorsada QGIS: Hordhaca Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed horas 60 30-ene-2018 250 € GeoInnova
12 QGIS - Waxaan leenahay tayada horas 100 lama qeexayo 250 € Tababar Juqraafi ah EN
13 Nidaamka Nidaamka Macluumaadka ee QGIS (GIS) Saacadaha 32 Presencial lama qeexayo 470 $ GIS Mexico
Sida aad arki karto, waxaa jira waxyaabo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad la yaaban tahay:
Iyo kooraskee ayaa ii habboon?
1 Koorasyo ​​lacag la'aan ah. Haddii aad si degdeg ah u barato inaad barato, koorsooyinka bilaashka ah waa ikhtiyaarka ugu fiican, sababtoo ah uma baahnid inaad u tagto codka kooxda iskuulka. Taas macnaheedu waa koorsooyinka Udemy waa hab kale oo wanaagsan, waxaad bilaabi kartaa wakhti kasta oo aad marin u hesho si aad u aragto weligood, si ka duwan kuwa kale oo aad haysatid oo keliya markaad kooraska socoto.
Maadaama ay yihiin koorsooyin bilaash ah, badanaa waa ka raqiisan yihiin. Sidoo kale, qiimo jaban oo aad ku heli kartid wax ka yar lacagtii 15.
2 Koorsooyinka Kooxda Haddii aanad degdegin oo aad rabto in aad koorso u qaadato mudo jadwal ah, siyaabaha kala duwan waxay u dhexeeyaan 200 iyo 250. Kuwani waa dhedig, laakiin waa koox macalimiin ah iyo koox wadaag ah, oo aad ka faa'iideysanayso kaalmadii macallinka iyo su'aalaha / jawaabaha laga helo saaxiibada fasalka ah ee ku yaala golaha.
Faa'iidada noocan ah waa in ay la xiriiraan barnaamijka Master, si aad u qaadato koorasyo ​​kale oo aad u sareeya iyo helitaanka warbaahin abaal-galka ah.
3 Koorsooyinka soo-jeedinta. Dalabkani waa sii yaraanaya, oo wali loo isticmaalo jaamacadaha ardayda ee xerada; iyada oo faa'iido darrooyinka kharashka badan iyo saameynta la xidhiidha jadwalka, gaadiidka iyo u wareejinta fasalka. Tusaale ahaan waxaan ku dhejineynaa GIS Mexico, taas oo ka sarreysa lacagta 470 ee saacadaha 32. Inkastoo koorsadu aad u wanaagsan tahay, waxay ku xaddidan tahay juqraafi gaar ah.
Ka warran aqoonsiga?
Waxaa muhiim ah in koorso kasta oo aad hesho, waxaad dalbataa cadeyn. Tani waxay noqon kartaa diblooma fudud ee shirkadda wax iibsata, oo aad ku taageeri karto resumeygaaga, sababtoo ah waxay badanaa waydiiyaan markaad ku muujiso manhajkaaga. Haddii ay ku siiyaan aqoonsi ah oo kuu sheega sida loo buuxiyo shahaadada ama shahaadada mastarka, aad u sii fiican.
Haddii aad ka ogaato koorsooyinka kale ee QGIS ee Isbanishka ee la soo saaro wakhti go'an, ha ka waaban inaad noo sheegto.
Saaxiibka Hordhaca barnaamijka shabakada ee barnaamijyada GISFahmitaanka aasaaska barnaamijyada shabakada waxay diirada saarayaan arjiyada jiilaalka isticmaalaya Isticmaala, Turf.js, iyo PostGIS€ 99.99€ 64.99 4.6
Saaxiibka Falanqaynta Xogta Macquulka ah ee Mabaadi'da: CGIS-ga RG iyo QGISNoqosho Aad u Yaqaano Falanqaynta Xogta Xogta Isticmaalida R & QGIS Markaad Ka Shaqeyneyso Mashruuca Real - La Shaqo Xogta Muuqaalka!€ 199.99€ 129.99 4.3
Post Previous«Previous Dhulkani kuma aha iibka
Post Next Toban sababood oo ah in la sameeyo xogta dhuleedNext »
2 Jawaab in "Koorsooyinka ugu fiican QGIS ee Isbanishka"
QGIS isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2018 at
Waxaan ku darayaa koorso bilaash ah oo QGIS ah oo tayo wanaagsan leh.
Juan isagu wuxuu leeyahay:
Abriil, 2018 at
Waad ku mahadsantihiin Aad ayay iigu fiicnaan doontaa.